Khaladka laga fahmey inay reeruhu wax kala sheegtaan & sida qayb ahaan lagu xallin karo | Hadalsame Media
Home Maqaallada Khaladka laga fahmey inay reeruhu wax kala sheegtaan & sida qayb ahaan...
Khaladka laga fahmey inay reeruhu wax kala sheegtaan & sida qayb ahaan lagu xallin karo
(Hadalsame) 01 Jan 2021 – Burburkii ka dib qabiilooyinka Soomaalidu wax ay ku waasheen gooni wax u sheegasho ku saabsan dawladnimada, taas oo iyaduna keentay in waxa la sheeganayo la galiyo nuxur aan ku jirin oo buunbuunin ah.
Fahanka khaldamay waxaa ka mid ah dawlad, caasimad, madaxweyne iyo wasaarad.
Taasi wax ay markeeda keentay in la isla fahmi waayo magacyada iyo tilmaamaha dawladnimada oo noqday haantaahadhuubla. Haddaba si loo hagaajiyo fahanka dawladnimada waa in la adeegsadaa erayo habboon oo aan maatada la majarahabaabin.
Wax aan soo jeedin lahaa in magacyadan la gu beddelo kuwan kale:
Dawlad goboleed waa qalad. Maamul goboleed baa sax ah.
Madaxweyne dawlad goboleed waa qalad. Guddoomiye maamul goboleed baa sax ah.
Wasiir dawlad goboleed waa qalad. Agaasime hay’ad goboleed baa sax.
Caasimad dawlad goboleed waa qalad. Xarun maamul goboleed baa sax ah.
Previous article“Ayeeydeey baa Faransiis ah!” – Aabbaha RW UK oo qirtay inuu qaatay Baasaboorka Faransiiska habeenkii ay UK ka baxday EU
Next articleQiil malloo heli karaa inuu MW Farmaajo uu Aqalka Madaxtooyada ciyaarta ku daawado (Hal su’aal oo bilaa jawaab ah)